धरानमा मेयरको चर्चाः मञ्जु भण्डारी जो केन्द्रलाई जोड्न सक्ने एकमात्र पात्र::Hamro Koshi Awaj / awaz
धरानमा मेयरको चर्चाः मञ्जु भण्डारी जो केन्द्रलाई जोड्न सक्ने एकमात्र पात्र
२०७९ वैशाख १९
अनुभवी र क्षमतावानः
धरानको मेयरमा यसपालि अरु प्रत्यासीभन्दा मञ्जु भण्डारी धेरै सशक्त र बलियो उम्मेदवारी हुन् । स्व. मेयर तारा सुब्बाको निधनपश्चात् छोटो समय भए नि उहाँमा कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी समाहालेको अनुभव छ । ५ वर्ष उपमेयरको जिम्मेवारीताका विवादरहित र निष्पक्ष भएर जनताको सेवामा हरदिन खटिएकी एक जनसेवक नेतृ ।
स्थानीय सरकार भनेको जनजनको प्रत्यक्ष सरोकार सँग जोडिएको हुन्छ । स्थानीय सरकार तपाई जनताको घर आँगनको सरकार हो । स्थानीय तहमा जनताले आफ्नो समस्या र गुनासो सुन्ने, बुझ्ने र निर्धक्कसँग राख्न पाउन सक्ने नेतृत्वलाई जिताउनुपर्दछ । जनप्रतिनिधिहरु जितेर गएपछि एक दुई वर्ष कर्मचारी प्रशासनको सिस्टम बुझ्न नै समय लाग्दछ । धरानवासी हामी सतही चुनावी प्रचारको लागि यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेर झुटा आश्वासनको पछि लागियो भने मेकअप गरेकी केटीलाई झेरीले भिजेको हालतमा देखिएको धोका जस्तै हुन्छ ।
अहिलेको स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन एक कस्मेटिक आइटम हो । जनताको भोट प्रलोभनमा पार्न बनेको यो यो साँठगाँठको गठबन्धन एजेन्डा र विचार नमिल्ने र अभिव्यक्त गर्न नसक्ने ठगबन्धन हो । अब धरानबासीले प्रशासनिकरुपले खारिएको र अनुभवी धरानेवासीको प्रत्येक टोल टोल पुगेको, घरघरको समस्या बुझेको सूर्य ध्वजावाहक नेतृत्वलाई विजयी गराउनुपर्दछ । सँगै काम गर्दा र बस्दा ठाकठुक पनि हुन्छ तब त एकअर्काको समस्या र मर्म बुझ्ने अवसर मिल्दछ । यसपालिको चुनावमा धरानेको समृद्धि र विविध विकासको लागि धरानवासीले दूधको साँची बिरालो राख्ने कि अनुभवी र योग्य उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउने तपाईको हातमा छ ।
युवा र महिला नेतृत्वको विकास र अवसरः
विश्वभर राजनीतिक क्षेत्रमा महिला सहभागिता न्यून मात्रमा विद्यमान छ । दक्षिण एसियामा तुलानात्मकरुपमा नेपाली माहिला राजनीतिक क्षेत्रमा अगाडि छन् । तर राजनीतिक र प्रशासनिक रुपमा राज्यको कार्यकारी भूमिकामा औंलामा गनिने जतिले मात्र स्थान पाएका छन् । अब धरानवासीहरु जाग्ने बेला आएको छ । मुठ्ठी कसेर लाग्ने बेला आएको छ । एक युगमा एकचोटी आएको यो अवसर हो । एक त धरान हर समय परिवर्तन र आन्दोलन मोर्चामा अग्रस्थानमा रहेको छ । प्रत्येक धरानवासी आमा, महिला र दिदी बहिनीहरु आफै न्यायाधीश र आफै वकिल बनेर धरानलाई निर्माण गर्ने सुवर्ण अवसर आएको छ । पूर्वबाट सूर्य उदाएझैं धरानबाट आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवारलाई जिताउनु तपाईहरु कर्तब्य हो ।
यसपालीको निर्वाचनमा भण्डारीलाई जिताउनु प्रत्येक गृहिणी, मजदुर, कर्मचारी, शिक्षिकालगायत सम्पूर्ण महिलाहरुको विजय पनि हो । भाषणमा ठूल्ठुला महिला मुक्तिका कुरा गरिन्छ, ब्ययभारमा भने फस्ल्याङफुस्लुङ पारिन्छ । जनयुद्धमा हजारौं वीरङ्गनाहरुले बलिदानी दिए तर अवसरबाट पन्छाइए । त्यसैले भण्डारीको विजय ती ज्ञात वीरङ्गनाहरुप्रतिको नि सम्मान हो । नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा युवाहरुको सहभागिता बढ्दै गरे पनि महिला युवाहरुमा वितृष्णा पैदा हुँदै गरेको अवस्था छ । राजनीतिमा महिला नेतृत्वको विकास गर्न र उनीहरुको आत्मबल बढाउन नि उनले जित्न आवश्यक छ । यसपटक धरानले ब्यालेटमार्फत लैंगिक विभेदमाथि प्रहार गर्दछ । महिलाको आत्मसम्मान उचो बनाउँछ । धरानले नेपाली राजनीतिमा एक छुट्टै पहिचान दिनेछ । एक परिवर्तन र महिला मुक्तिको विजयको झण्डा नि फहराउने छ ।
जातीय सन्तुलन र प्रतिनिधित्वः
धरान जनजातिहरुको बाहुल्य भएको मुलुक हो । अहिले बुझेर या नबुझी एउटा हल्ला फिजाइँदै छ कि धरानबाट क्षत्री, बाहुनहरुले चुनाव जित्दैन भनेर । हामी कुन जमाना को कुरा गरिरहेका छौं । मानवको जात भनेको मात्र महिला र पुरुष । यो विश्वव्यापी सत्य हो । सञ्चार र यातायातको दुनियाँमा अहिले संसार नै एउटा गाउँ जस्तो बनेको छ । अहिलेको जमानामा एक देश र अर्को देशबीच राजनीतिक र ब्यापारिक मात्र होइन सांस्कृतिक र वैवाहिक सम्बन्ध नजोडिएको कुन मुलुक होला र ? नेपाली नपुगेको कुन ठाउँ होला ? विश्व र समाज यो स्तरमा पुगिसकेको अवस्थामा हामी भने अझै २० औं शताब्दीतिरको सोच पाल्दै बस्नु हामी पछाडि पर्नु हैन र ? यो धरान कुनै विशेष जातिको बिर्ता पनि होइन । नेपालको संविधानले कुनै खास वंश र जात, समुदायबाट मात्र नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन । संरक्षण र आरक्षणको सुविधा त छँदैछ । नेपाल कुनै जाति विशेषको नि बिर्ता होइन । हामी यो संविधानलाई मान्छौं र देशको मार्गदर्शनको रुपमा लिन्छौं भने यो दलीय ब्यवस्थामा एमालेका सुवास नेम्वाङ, माओवादीका वर्षमान पुन र काङ्ग्रेसका धनराज गुरुङ प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बन्न लायक छन् भन्ने सोंच राख्ने पहिचानवादी दलका साथीहरुले पनि यसपालिको चुनावमा भण्डारीलाई जिताउनुपर्दछ । भोट हाल्दछन् ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तह जोड्नः
धरान यस्तो बन्नुमा, विकासमा धराने जनताको जनसहभागिता पनि हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारका हिसाबले धरान भन्दा निकै पछाडि रहेका शहरहरु अहिले धरानभन्दा निकै अगाडि बढिसकेका छन् । धरान पछाडि पर्नुको कारण के हो ? यहाँका जुनसुकै दलका नेताहरुबाट धरानलाई केन्द्रसम्म जोड्न नसकिएको हो । केन्द्रीय नेतृत्वको नजरमा धरान ओझेलमा परेकै हो । ठूला ठूला विकास र आयोजनाहारु ल्याउन नसकिएको हो ।
विकास गर्न बजेट आवश्यक पर्छ । यहाँको स्रोत साधनले त कर्मचारी पाल्न धौधौ पर्छ । भनेपछि अहिलेको सिस्टममा जति कराएपनि जबसम्म धरानको नेतृत्व, केन्द्रको नजरमा नजोडिएसम्म भावनाको राजनीतिले धरानको समस्याको समाधान र विकास गर्छु भन्ने एउटा हुटिट्याउले आकाश थाम्छु भने जस्तै हो । र त्यो सम्भव देखिँदैन । अब धरानको विकास र समृद्धिका लागि निर्विकल्परुपमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रलाई जोड्न सक्ने एक मात्र पात्र भण्डारी हुन् ।
कम्युनिष्टको उर्वर भूमी
भनिन्छ, धरानलाई नेपालको संघाई शहर हो । पहिलो कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई धरानले विजयी गरेर पठाएको हो । धरानले पूर्वका अहिलेका अधिकांश कम्युनिस्ट नेताहरु जन्माएको शहर हो । धरान कम्युनिस्टको गढ हो । धरानको कम्युनिस्ट किल्ला कहिले तोडिएको थिएन । तर विविध कारणवश उपनिर्वाचनमा हार व्यहोर्नु परयो । अहिले कम्युनिस्ट सकाउन र हराउन गठबन्धनका नाउमा भष्माशुरहरु लागि परेका छन् । यो ठूला नेताहरुको जुंगाको लडाइँमा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरु केही विचलनमा परेका छन् । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई क्षती पुगेको यो अवस्थामा धरानमा रहेका सम्पूर्ण कम्युनिस्ट समर्थक र शुभचिन्तकहरुले पुरानो बिरासतलाई फर्काउनुपर्दछ ।